ikhaya » iindaba » Ukusasazwa kweeNkqubo ezingenazintambo ze-Wireless transmitter zigqiba umcimbi we-200th kwi-Broadcasting Broadcast
IBC 2017, 15 - 19 Septemba, Yima 1.A78 - Ukusasazwa kweeNkqubo zeN Wireless (BWS) Namhlanje ivakalise ukuba i-Northampton-Based Basedatile Broadcast, ekhethekileyo kwisisombululo se-RF kubantu abasasazweni base-UK, igqibile i-200th 1080p HD isabelo usebenzisa i-BWS NanoPRO TX.
Ngokutsho koMlawuli oyiNtloko oPhathiswayo oPhathelene nokuSasazwa uNeil Shepherd, "Ukugqiba umsebenzi wethu we-200th ngokusebenzisa i-NanoPRO TX entsha, kum, impumelelo kunye nemfundiso yokuhlala nokuthembeka."
Ubuncinane balo buncinane kunye nokusetyenziswa kwamandla aphantsi kwenza i-BWS NanoPRO TX ibe yindawo efanelekileyo yokuthunyelwa kwe-UAV, isithuba esikhethekileyo sokusasazwa kwezinto ezininzi-ukunika ithuba lokuqala lokwenyani HD ukusasazwa kwezi zixhobo ezidumile. Ukukhethwa kwamandla okuncinci, okuncinci kwamandla okusetyenziswa kwamandla akhona anokubonelela ngokubanzi xa kunyanzelekile.
"Sisebenzise i-BWS NanoPRO TX ngeendaba, iziganeko, kunye nemidlalo ... emininzi yemidlalo ... kwaye ayizange isinike phantsi, ngokungathandabuzeki ukuba kutheni sifunde le nto ibaluleke kakhulu."
I-BWS NanoPRO TX isebenzisa i-ultra-low latency i-H.264 (MPEG-4 AVC) yokudibanisa ukugcinwa kwekhwalithi ebonakalayo phezu kwekhonkco engenazintambo kwaye isekela i-SDI & HD-SDI amafomu okufakelwa kwevidiyo ukuya kwi-1080p50 / 59.
I-BWS i-NanoPRO TX iquka izixhamli eziqhelekileyo zoshishino kwi-RF, ividiyo, amandla / idatha, i-audio kunye nokulawula. Iphaneli yokulawula i-joystick panel kunye ne-OLED ibonakaliso nayo ibhodi ukuze kube lula ukulawula nokujonga zonke iiparitha.
UMlawuli we-BWS uStuart Brown wathi, "Sinobudlelwane obuhle kakhulu bokusebenzisana kunye noTshintshiso oluthileyo kwaye siyavuya kukuba uNanoPRO TX uye waba yinyaniso yeyona nto eyenzayo.
"Sinqume ukususela ekuqaleni kwe-BWS ukuba siza kuvelisa kuphela iimveliso ezifana ne-NanoPRO TX ukuba sinokuqiniseka ukuba baza kunikezela isisombululo sehlabathi sangempela kubathengi bethu. Emva kwe-200 deploments ye-NanoPRO TX ngomthengi omnye, ndicinga ukuba le ngongoma ibonakaliswe. "
I-TV ye-2 iya kwandisa i-IDS kwiindawo zaseBergen nase-Oslo - Julayi 17, 2018
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli Ukusasazwa kweeNkqubo zeN Wireless BWS Bahlala kwimidlalo NanoPRO TX RF Ukusasazwa okuninzi Injini yeVidiyo Ikhamera engenantambo	2017-09-13
Previous: I-GLOOKAST Inika amandla iDynamic Ingest kwi-IBC
next: Ubumnyama bukhulisa kakuhle kwimveliso yokupasa ngePixel Power